Okanye ukujonga ukuba waboleka imali ukuba iinqobo kuviwo
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Okanye ukujonga ukuba waboleka imali ukuba iinqobo kuviwo
Xa usenza isicelo ukulondoloza, abathengi malunga kokuqala koviwo engaziwa.
kuzo abazange abangalupasanga uviwo nakuba ngemeko inkathazo ngaphandle kwemali eyaneleyo, imali ayikwazi avuswe.
Ngoko ke, masikhe ukwazi kwangaphambili malunga nokuba kancinane nokuba uviwo kungenzeka nje, nokuba isidanga yi umda imali eliphezulu imali emiselwe yi uviwo.
, kwaye hayi ukuba angahlawula kakuhle imali, baya ekhawulelana egciniswe ukulahleka.
Ngoko ke, aphantsi kwaye nto leyo izinzile yengeniso, kusenokwenzeka ukuba wayephethwe neqabane high-risk yokuba abanezakhono kwimizobo.
Ngoko ke, nceda ugcine ngokucinezela kuba yeyona kakhulu ukuba ube umbandela ezinjengezi zilandelayo kwi egciniswe. High kunye esezantsi yengeniso
: i eliphezulu elikhulu kumda,
ingeniso ekuqaleni ngaphezulu ngokuxhomekeke umda osezantsi eyiyo xa phantsi okanye esitalini: Ukuba awunguye uzinzile, uphantsi umda okanye ukwala ngokutsha, oluzinzileyo kwimeko leyo kakhulu ukuba ziqwalaselwe phantsi
ingcamango ukunyusa umda kungaphelelanga ingeniso, andazi ukuba yintoni na ingongoma ngenxa yengeniso unokude ube mnye.
Oku, Kakade ke, abo inkqubo yemivuzo ngenyanga, ezifana bexesha elizeleyo yaye abasebenzi bethutyana, kuba kubonakele ukuba kukho ingeniso nkqu nabantu abasebenza kwi ngeyure, ezifana part-time omsebenzi part-time.
Nangona kunjalo, umsebenzi Dattari inkampani abafundi abatsha, zithanda viwo luza kuba kakhulu kwaye kananjalo okanye ekuyeni lwendawana, efana ngokutshintsha emsebenzini amaxesha amaninzi.
Ngesizathu esifanayo, kuba ngaphezu uzimele naye kunzima yoviwo. Kuba
isixa-mali sengeniso, uya kuphononongwa ngokufaka ezifana zikhondo pay okanye isiliphu ukubanjwa.
Xa inxalenye yemali nkonzo, ukuba akukho impazamo kwindawo yomsebenzi leyo wavakaliswa, apho ityala liqhubeke ku iimviwo noba eboleka ngaphandle kokuba ukungenisa amaxwebhu ukubonisa ingeniso akukho ngaphantsi.
reference / proof'll ukugcina uyazi phambi kokuba ukuboleka imali sakho
reference / < a href = "http: //xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/11th_hours.html "> esisikhupheli sokuxhaphakileyo sakho
abo bafuna ixesha lokuba ukuboleka imali kunye
imali ngemali ukuba kwaziwe ukusuka kubomi bemihla ngemihla, nokuba akukho ngxaki nokuba wababoleka imali, naye omnye iinqobo ze .
zoviwo umzekelo amagama, omnye yaye oko ukubeka ukubeka endlwini, abo siphindaphinda utshintsho umsebenzi wenziwa kubabeka engxakini kwiimviwo kukho ithuba imale .
Ngaphezu koko, ukongeza kwezi, kwimeko yokuba kuye kwakho ngembali ingozi, ezifana intlawulo wanamathela omnye kunye arhente inkcazelo ngeentengo zemboleko ukuba babe namava ukuboleka kwixesha elidlulileyo, njengomntu ezimbalini ingozi uya kuya kukhatywa kuviwo .
kwakhona, ukuba kwenu eboleka isicelo kumaziko ezininzi zemali ngexeshana elifutshane kwexesha, uya kuba okwethutyana ukuboleka kuchazwe .
le, ingozi Ngokungafaniyo imbali, isiqingatha sonyaka Yabhalwa malunga omnye ngonyaka ukusuka ke ayisendim, kodwa loo mali kunye nazo ukwenza isicelo ngokutsha phakathi, i-risk yokuba ixesha iba elide kwenzeka .
Ngoko, Zama ukubeka ixesha kanye Xa ndingavumi yokubuyekeza. ukuba okanye hayi kukhona enjalo imbali ingozi
, ukuze ukwazi ukujonga kwi arhente ingongoma nganye qha okanye lasekhaya ke uyazi ukuba ifane .
kude eboleka imeko ye
Enoba akukho ngxaki
kwingeniso komhlaba kunye nokuziphatha komhlaba, oku ukuya yemalimboleko, kukho kwakhona iba amatyala kakhulu.
In umthetho ngoku, kuba iye yaba umthetho ongenako ukuboleka kuphela ukuya kwesinye kwisithathu yingeniso yonyaka njengoko ummiselo mali iyonke. Nangona lo mbuzo
zomlomo kukho ingongoma ucelwa rhoqo, lumka kuba ayisoloko wathi ngenxa uviwo.
Nangona kunjalo, kwimeko abo nabanini bamashishini ngamnye ukuboleka njengoko mali zoshishino, kuya kuba ngaphandle kwenkululeko ezingummiselo mali iyonke.
lo Ukongeza, abo ombutho kunye, kuba loo iziqinisekiso zokuboleka zobuqu ukuba akayi kuhlawulwa, ukuba, kwimeko ukuboleka iye lowu yi kwimali iyonke imimiselo, imiqathango ngokubonelela estate wokwenene iziqinisekiso uya kukwazi ukusula.
kuquka ngemali umthengi, xa kubuzwa ukuba ukuboleka imali kumaziko ezemali, inkcazelo yokuba "umntu owenza isicelo," ezifana nengeniso kunye nokuziphatha kuya kufuneka ukuyenza. Nokuba yeyani ekubizwa imali
, ukuba uzimisele ukuba meko, apho kuhlawulwa ngaphandle kokuba kwenkomfa phakathi off, iimviwo uya kucanda ngaphandle naziphi na iingxaki.
Kwelinye icala ukuba ufuna ukuboleka imali kwi imeko apho imeko ekhoyo kunye ezingabonakaliyo ngaphambili, okanye xa kufunyaniswa ukuba wenze nje isicwangciso intlawulo ezingacacanga, nayo rhoqo ubonisiweyo ukuba kwakunjalo na ibakala review xwebhu.
Kuba eboleka meko, nokuba kwenziwa isicelo kwamanye amaziko ezemali, yi-arhente ulwazi ngekhredithi ibe ukwabelana ngolwazi.
ukuba, nabo ukhetho ukuzama ukuqinisekisa ukuba kusenokwenzeka ukuba wachaza ezinye uhlobo lolwazi ukuba uye wabandakanyeka uviwo. Kwaye
indlela elungileyo, ukuba benze isicwangciso ecocekileyo ukulungiselela intlawulo, kufuneka ube ukuboleka imali njengoko oyifunayo. Kuquka
ngemali umthengi, xa kubuzwa ukuba ukuboleka imali kumaziko ezemali, inkcazelo yokuba "umntu owenza isicelo," ezifana nengeniso kunye nokuziphatha kuya kufuneka ukuyenza. Nokuba yeyani ekubizwa imali
indlela elungileyo, ukuba benze isicwangciso ecocekileyo ukulungiselela intlawulo, kufuneka ube ukuboleka imali njengoko oyifunayo.